Ọkachamara Semalt na-ekwusi ike na Ị Dị Mkpa Iji Chebe A Weebụ Site na mbanye anataghị ikike Mgbalị - Lee otú
E nwere ọtụtụ ụdị mwakpo ọjọọ na ịntanetị. Ọtụtụ ndị na-eche ọrụ ahụ ihunke ọtụtụ ndị omempụ na ụbọchị ha na-arụ ọrụ taa nakwa n'oge ha ọrụ. Ndị na-agba chaa chaa na-etinye oge dị ukwuu na-agbalị ịchọtaụzọ dịgasị iche iche ha nwere ike iji rụọ ọrụ ha. Ọtụtụ n'ime ụzọ ndị a gụnyere ọrụ ndị dị ka ọgụ DDOS ma ọ bụ ọbụna ebe ị na-agafescripting. Ihe mgbochi a nile bu ihe ndi mmadu na-eche na ndi mmadu - computer repair company names.
Ọ na - abụkarị, ndị na - agba ọsọ nwere ike ịmebe ebe nrụọrụ weebụ gị maka ọtụtụ ihe. Ọtụtụ mgbe, ha nwere ike ịbụna-ezu ohi ozi njirimara dị ka ozi kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ ọbụna hacks panel hacks. N'ọnọdụ ndị ọzọ, onye na-egwu ihe nwere ike ịzụta ihe bara uruozi sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị ka ozi onye ahịa na ihe ndekọ dị iche iche maka ọtụtụ akụkụ dị mkpa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị na-agba ọsọnwekwara ike ịme asọmpi na-ezighị ezi ebe onye na-egwu ihe nfe nwere ike iwetu ebe nrụọrụ weebụ gị ma ọ bụ Search Engine Optimization (SEO) ranking in aụzọ dị iche iche. N'ihi ya, ọ dị mkpa iji kpuchido usoro gị site n'aka ndị na-agba ọsọ.
Jack Miller, ọkachamara na-ahụ maka Ọcha ,kọwakwuo ụfọdụ n'ime ụzọ ndị nwere ike isi gbochie gị ịwakpo ndị a:
Nchedo site na ntinyeghị ikike
Otu n'ime ihe kachasị mfe nke onye ọ bụla nwere ike ime na saịtị gị na-agbalị ịbanye dị ka onye nlekọta.N'ihi ya, onye hacker nwere ike ịnwale ịkọwa okwuntughe dị iche iche iji chọpụta onye n'ime ha nwere ike ịda n'ihi amaghị ihe gị. Iji ederede okwuntughedị mkpa. Okwuntughe dị ka 12345 adịghị echedo ma nwee ike ikpughe ụlọ ọrụ weebụ niile na onye hacker. Ọzọkwa, ị gaghị eji paswọọdụnke ahụ dị mfe iche. Okwu dị ka aha nwa gị nwere ike ịbụ ihe zuru oke maka onye nwere ihe ọmụma a. Kama nke ahụ, gbakọtaụdị dị iche iche dị iche iche.
Nke a bụ mbanye anataghị ikike nke chọrọ njedebe onye njedebe. Akpa a gụnyere iji ụfọdụ n'imeụdị na mpaghara ederede ị na-eji, dị ka ụdị ndebanye aha. Onye na-eji ihe eji egwu egwu na-agbazi koodu ntinye na ụdị ọrụ nke nwere edemede. N'eluịkụ aka abanye, edemede ahụ ga-amalite agba ọsọ na ihe nkesa gị. N'ihi ya, hacker nwere ohere ịnweta data nke ndị ahịa, gụnyereigodo nke onye ahịa zutere oge ọ bụla ha na-abanye na mkpokọta weebụ gị. Iji dozie nsogbu a, ị ga-achọ ụzọ ị ga-esi gbanwee yaozi nke ụdị gị tupu ị na-azụ ha na nchekwa data gị. N'ihi ya, edemede ahụ agaghị agba ọsọ na nchekwa data gị ebe ọ bụ na enweelarịrịeme ihe iji mee ka ọ ghara ịgba ọsọ.
Maka azụmahịa ọ bụla e-azụmahịa, nchebe cyber bụ nchegbu kachasị mkpa mgbe ọ bịaraarụ ọrụ n'ịntanetị. Enwere ọtụtụ mgbalị mbanye anataghị ikike na mmadụ ndị nwere ike ịchọ mbanye anataghị ikike weebụ gị maka ọtụtụ weebụsaịtị. Nche nke gịsaịtị, yana ọdịmma nke ndị ahịa gị, na-adabere na ọrụ nke gị dị ka onye nlekọta ha.